M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ - Most Recent
M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ငရဲဆိုတာ
Posted By: Majjhima
ငရဲဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်လို့ တောင် ပျော်စရာမကောင်း ဘူး
Tags: ငရဲ hell hell imigination News - သတင်းများ ဓမ္မစကြာသင...
Posted By: sansanhtaywin
ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) ၏ ဓမ္မစကြာသင်တန်းနှင့် မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင် ကောဝိဒ၏...
Tags: ဓမ္မစကြာသင်တန်း ဓမ္မသဘင် တရားပွဲ ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် dhammasetkyar dhamma setkyar dhamma teaching dhamma talk ashin wiriya taung soon ashinwiriya majjhima gonyi myitzima gonyi sayardaw dr ashin kawvida kawwida dhamma ceremony M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မဇ္ဈိမဂုဏ...
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ နယူးယောက်မြို့ ၊ လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း (ဘာဂင်ကျောင်း)
Tags: မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒ ၀ိပသနာ တရားအားထုတ်နည်း ဓမ္မသဘင် တရားပွဲ majjhima gonyi myitzima gonyi doctor ashin kawvida kawwida dr.kawwida ukawwida u kawwida vipassana wipatthanar wi pat tha nar tayarpwal ta yar pwal dhamma lawkachanthar temple meditation dhamma teaching M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သူ့လိုတွေ...
မေလ ၂၆ ရက်နေ့ Serramonte Blvd, Daly City, California USA ၌ဆရာတော်ဦးကောဝိဒ ဟောကြားတော်မူသော
Tags: ookawwida oo kaw wi da thu lo twe par think like him myitzimagoneyae myitzima goneyae ashinkawwida kawwida Ukawwida U kawwida myitzimagonyae majjhima gonyi Ukawvida U kawvida News - သတင်းများ မဇ္ဇျိမဂုဏ...
Majjimagonyi 2012 USA Trip
Tags: Majjima Gonyi 2012 May to July M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မဇ္ဈိမဂုဏ...
မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ၏ တရားတော် 'လူ့ဘဝဂုဏ်ရည်တရား '
Tags: မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဒေါက်တာအရ...
U Kovida ( MizzimaGoneYi)
ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒ-အမေအိုရဲ့အောင်လံ(၂) Tags: MizzimaGoneYi M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မြင်တတ်ကြ...
Tags: ဦးကောဝိဒ Pages: 1 of 1